Ilungelo lethu -Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
UKUQHELEKA KWinto Yonke Esiyenzayo
Sizinikezele ekunikezeleni izisombululo zokupakisha ezikumgangatho ophezulu ezinokubakho kubathengi bethu, kunye nasekuphuhliseni iimveliso ezintsha nezintsha.
Sizimisele ukubeka abathengi bethu phambili kwaye ukubonelela ngenqanaba eliphezulu lenkonzo yabathengi kunye nolwaneliseko kuyo yonke inkqubo. Siya kuhlala sivulekile, sinyanisekile kwaye sinxibelelana nabanye. Sizama ukusoloko siqwalasele iimfuno zabathengi bethu kwaye sinike ezona zisombululo zingcono zokupakisha, ngaphandle komgca wethu ongezantsi.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO NGEXABISO ELIHLE
Sinikela ngazo zombini Isitokhwe kwaye Ngentando iimveliso zokupakisha, kuxhomekeke kwiimfuno zabaxumi bethu. Iimveliso zethu zesitokhwe zikhethwe ngononophelo kwaye zigcinwa zikhona kwigumbi lethu lokugcina izinto.
Indawo yokugcina izinto zeKeming, elungele ukuthunyelwa ngomzuzwana, ngelixa iimveliso zethu zesiko zinokwenziwa, zigqityiwe, kwaye zishicilelwe ukuhlangabezana nembonakalo eyodwa yohlobo lwakho, ngoluhlu Iinkonzo zokwenza ngokwezifiso. Nokuba ukhangela izinto ezikumgangatho ophezulu okanye ezona zilungileyo ekupakishweni okwenziwe ngokwezifiso, sineemveliso kunye neenkonzo ezilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zakho kwaye zigqithise kulindelo lwakho.
Similisele amanyathelo aluhlaza agxile ekupheliseni inkunkuma kunye nokukhuthaza ukusebenza kakuhle, kwaye sandisiwe sivelisa ukupakisha ngezinto ezinokurisayikilisheka zize ziphinde zisebenze kwakhona. Sizimisele ekubeni ngumvelisi oluhlaza, kwaye sihlala sijonge ukuphucula nokucokisa iinkqubo zethu zokunciphisa ifuthe lethu kwiplanethi.
Ukongeza olunye umaleko lokhuseleko ukuqinisekisa ukuba uyakufumana ukungaguquguquki, ukugqwesa, kunye nexabiso ngalo lonke ixesha usebenza nathi, sobabini si-ISO 9001 kunye ne-ISO 14001 siqinisekisiwe. Sikwenye yeempawu eziphambili zamanye amazwe esisebenza nazo. Ezi ziqinisekiso kunye nophicotho-zincwadi ziqinisekisa ukuba uya kufumana ezona mveliso zilungileyo, ngalo lonke ixesha.